Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gaaray magaaladii uu ku dhashay oo Go’doon ku jirta (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gaaray magaaladii uu ku dhashay oo Go’doon ku jirta...
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gaaray magaaladii uu ku dhashay oo Go’doon ku jirta (Sawirro)
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan arrimaha Bani-aadannimada iyo gurmadka abaaraha, Md. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta gaaray magaalada Buula-burte ee gobolka Hiiraan.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa safarka waxaa ku wehliyay xubno ka socda hay’adda Cunnada Adduunka ee WFP iyo UNHCR, waxa ayna u kuur galayeen xaalada abaaraha iyo mida bini’aadanimo ee ka jirta magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran.
Ergayga iyo xubnaha la socday ayaa kormeer iyo indha-indheyn ku tagay, xeryo barakac oo ku yaalla magaaada Buulo-burte, waxa ayna halkaasi kusoo arkeen xaaladaha adag ee ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee xeryahaasi ku sugan.
Barakacayaasha ku jira xerooyinka uu booqday ergayga ayaa u badan carruur, haween iyo dad da’ ah, waxa uuna Dowladda Federaalka, deeq-bixiyayaasha caalamiga ah, kuwa aan caalimiga ahayn iyo umadda Soomaaliyeed ee wax heysata ugu baaqay in gargaar iyo gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadkaas.
Magaalada Buulo-burte ayaa muddo dhoor sanno ah waxaa go’doomiyay dagaalyahanada Al Shabaab, waxaana dadka ku dhaqan magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran isugu darsaday go’doomin iyo xaalad ka dhalatay abaaraha .
Previous articleDowlad dadkeeda ka codsatay in ay iska yareeyaan Cabista Shaaha iyo Hal Sabab oo keentay
Next articleXildhibaanada golaha Shacabka oo arrin muhiim ah maanta ka shiray (Daawo Sawirro)